लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशको बीमाशूल्क आर्जन २८ प्रतिशत वृद्धि
साउन २९, काठमाडौं (अस) । गत आव २०७५/७६ मा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालले रू. १३ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ९८ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । बुधवार गत आवको चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै कम्पनीले उक्त विवरण उल्लेख गरेको हो । यो रकम अघिल्लो आव २०७४/७५ को तुलनामा २८ प्रतिशत बढी हो ।
गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफामा भने करीब ८८ प्रतिशत कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. १ अर्ब ३४ करोड ५५ लाख ४८ हजार नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. १६ करोड १५ लाख ३१ हजार मात्र नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष आम्दानी घटेकाले पनि नाफा घट्न पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष रू. १ अर्ब ६३ करोड १४ लाख ७५ हजार आम्दानी गरेकोमा गत वर्ष रू. ३१ करोड ३४ हजार मात्र आम्दानी गरेको छ ।
गत वर्ष १२ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत कम्पनीले रू. १ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख ३८ हजार चुक्तापूँजी कायम गरेको छ । यस कम्पनीले गत साउन २४ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामार्फत पारित ३४ दशमलव ४६ प्रतिशत बोनस शेयर समेत वितरण गर्न शुरु गरिसकेको छ । कम्पनीले साउन २७ गतेदेखिनै उक्त बोनस तथा ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न शुरु गरेको हो । जगेडा कोषमा रू. ९३ करोड ७९ लाख ३८ हजार छ । गत वर्षसम्म कम्पनीमा ७ लाख ९४ हजार ४५१ बीमालेख कायम रहेको छ ।